စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၈ ) ( ၀န်ထမ်းလစာ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၈ ) ( ၀န်ထမ်းလစာ )
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၈ ) ( ၀န်ထမ်းလစာ )
Posted by Foreign Resident on Feb 3, 2012 in Think Different | 48 comments
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၈ )
” Thanlwinoo ” ရေးထားတဲ့
” တိုးမြှင့်ပေးသင့်ပြီဖြစ်သော အရပ်ဘက်ဝန်ထမ်းလစာ ” ဆိုတဲ့ Post လေး
ကိုဖတ်မိပြီး တွေးမိတာ အဖြေရှာကြည့်မိတာ လေးတွေပါ ။
ပထမဦးဆုံး အနေနှင့် ဝန်ထမ်း လစာတွေ နည်းတာလည်း အမှန်ပါပဲ ။
ဒါပေမယ့် ၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မှာ
နိုင်ငံတော် အစိုးရရဲ့ ဘတ်ဂျက်လိုငွေ ၂၂၀၀ ဘီလျံ ကျပ် ပြခဲ့ပါတယ် ။
လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ မနှစ်က နိုင်ငံတော် အစိုးရ ရဲ့ ရသုံး မှန်းခြေ ငွေစာရင်းမှာ
မြန်မာငွေ ကျပ် သိန်းပေါင်း ၂၂၀ သိန်း ၊ အရှုံးပြ / လိုငွေပြ ခဲ့တယ်ပေါ့ ။
ဒါ နှစ်စဉ် ရှုံးနေတာနော် ၊ ဒီနှစ် ပိုတောင်များသေးတယ်လို့ ပြောပါတယ် ။
ဒီ ဖေဖေါ်ဝါရီ လဆန်းမှာပဲ
ဘဏ္ဍာရေး နှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးလှထွန်းရဲ့ ကြေငြာချက်အရ
နိုင်ငံတော် မှာ လက်ရှိ အကြွေး ဒေါ်လာ သန်း ၁၁၀၀၀
( မြန်မာငွေ ကျပ် သိန်းပေါင်း ၈၈၀ သိန်း ) တင်ရှိနေပါတယ် ။
လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ သန်း ၅၀ ခန့် ရှိမယ့်
မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးချင်းစီ တစ်ဦးချင်းစီတိုင်း မှာ
နိုင်ငံခြားကို ပြန်ဆပ်ရမယ့် အကြွေး ( ကျပ် ၁၈ သိန်း ) ခန့် စီ ရှိနေပါတယ် ။
( မွှေးကင်းစ ကလေးက အစ ၊ သူတောင်းစား အဆုံး ၊ နိုင်ငံသား အားလုံးမှာ )
ဟီဟိ ၊ အဘ ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်နေမိတဲ့အတွက်
ကိုယ့်မှာ တင်နေသလို / တာဝန် ရှိနေသလို ဖြစ်နေတဲ့
မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးချင်းစီ တိုင်းက နိုင်ငံခြားကို ပြန်ဆပ်ရမယ့် အကြွေး
အဘ ကိုယ်တာ Quota အကြွေး ( ကျပ် ၁၈ သိန်း ) ကို ဆပ်နိုင်ပါတယ်ကွယ် ။
ဒါကြောင့် ၊ အဲဒီ အခြေအနေကို သိပ်ဆိုးတယ်လို့တော့ အဘ မထင်ပါဘူးကွယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ သိပ်ကောင်းနေတဲ့ အခြေအနေ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ် ။
အဲလို အခြေအနေ မှာ
အစိုးရဝန်ထမ်း တွေ လစာ ထပ် တိုးစေချင်ရင်တော့
အစိုးရဝန်ထမ်း အနဲဆုံး ၃ ပုံ ၂ ပုံ ကို အလုပ် ဖြုတ်ပြစ်မှ ရမယ် ။
ကျန်ခဲ့တဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်း တွေက အလုပ်ကို လက်ရှိထက် သုံးဆ ပိုလုပ်ပေးရမယ် ။
ကျန်ခဲ့တဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်း တွေရဲ့ လစာ ကို ၂ ဆ တိုးပေးလိုက်မယ် ။
အလုပ် ဖြုတ်ပြစ်ခံရတဲ့ ဝန်ထမ်း တွေကို ပင်စင် / နစ်နာကြေးလည်း ပေးရအုန်းမှာကိုး ။
အဲတာကို ဘယ်လို သဘောရလဲဟင် ။
အပျော်သဘော ဆွေးနွေး ကြည့်တာပါ ။
အင်းအဘ ပြောတော့လဲဟုတ်သလိုလိုပဲ။ ဒီအကြွေးဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိလဲလို့တော့မမေးချင်တော့ပါဘူး။ အဘပြောသလိုပဲကိုယ်လဲဒီနိုင်ငံသားဖြစ်နေတာကိုး။ ကိုယ်လဲတာဝန်မကင်းဘူးပဲဆိုပါတော့။ အဲတော့ကာဝန်ထမ်းလစာတိုးရေးဟာနိုင်ငံသားတိုင်း အကြွးဆပ်ပေးပြီးမှရနိုင်မယ်ဆိုတော့ကာ။ လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပဲနော့။ ဒါပေမဲ့အဘပြောသလိုလူတိုင်း ၁၈ သိန်းမလုပ်ပဲ အဆင့်လိုက်ခွဲ လိုက်ရင်ကော။ သူဋ္ဌေး၊ လူလတ်တန်းစား၊ သာမာန်ဝန်ထမ်း နဲ့အောက်ခြေဆင်းရဲသား။ ခွဲလိုက်ပြီးတော့ အဲဒီသူဋ္ဌေးဆိုတဲ့လူတွေကိုပိုဆပ်ခိုင်းလိုက်ပေါ့။ သူဋ္ဌေးဆိုတဲ့လူတွေမသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာများပြီ။ သူတို့မှာအဓိကတာဝန်ရှိတယ်။ အဓိကကတော့သူတို့ကိုထိုက်သင့်တဲ့အခွန်တိတိကျကျဆောင် ခိုင်းရင်အကြွေးတ၀က်ကြေနိုင်ပါတယ်။ ဝေစားမျှစားလုပ်ခဲ့ပြီးမသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာတွေကိုရပ်
တန်းကရပ်ခိုင်းသင့်ပြီ။ နောက်ဗိုလ်ချုပ်အမည်ခံစီးပွားရေးသမားတွေ။ ဒါတွေနဲ့တင် တိုင်းပြည်အကြွေးတော်တော်ကြေနိုင်ပါတယ်။ ပြည်သူကဘာမှစားရတာမဟုတ်ဘူး။ လူလတ်တန်းစားက ၈ သိန်း သို့မဟုတ် ၅ သိန်းလောက် တာဝန်ယူ။ သာမာန်ဝန်ထမ်းက လုပ်အားနဲ့ တာဝန် ယူ။ ပြောချင်တာက အဘပြောတဲ့ ”ကျန်ခဲ့တဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်း တွေက အလုပ်ကို လက်ရှိထက် သုံးဆ ပိုလုပ်ပေးရမယ် ။” ဆိုတာကို လက်ရှိဝန်ထမ်းတွေ လက်ရှိလုပ်နေတာထက် နှစ်ဆလောက် ပဲပိုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ လစာတော့ မတိုးဘူးပေါ့နော်။ လခမတိုးခင်အကြွေးဆပ်ပေးတဲ့ အနေနဲ့လုပ်အားလေးနှစ်ဆတိုး ဆိုရင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေမလားလို့။လခမလောက်လို့အောက် ဆိုက်ရှာ၊ လခနဲလို့အလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်။ ဆိုတာတွေကိုပြုပြင်။ တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုတဲ့ စိတ်မွေးပြီးပညာပြတာတွေရှောင်ပြီးအားသွန်ခွန်စိုက်စေတနာ နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်တိုး တက်ပြီးအကြွေး လဲမြန်မြန်ကြေတော့လစာလဲမြန်မြန်တိုး တာပေါ့။ အောက်ခြေဆင်းရဲသားတွေ ကတော့လဲ တတ်နိုင်တဲ့လုပ်အားနဲ့ပဲအုပ်တချက်သဲတပွင့် တက်ညီလက်ညီကြိုးစားကြ မယ်ဆိုရင်ဒို့တိုင်းပြည်ဆင်းရဲတွင်းကနေအမြန်ဆုံးလွတ်နိုင်တာပေါ့။
စာရေးဆရာ Maurice Collis ရဲ့ Into Hidden Burma စာအုပ်မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၈၀-၉၀ လောက် ကိုလိုနီခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရေးပိုင်လုပ်တဲ့ အတွေ့အကြုံရေးထားတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်..။
သူတို့အင်္ဂလိပ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ရာမှာ လူအများကြီးမသုံးဘဲ ခရိုင်အဆင့်ရာထူးဘဲ အင်္ဂလိပ်ထားပါတယ်..။ ကျောက်ဖြူခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာ အရေးပိုင် သူနဲ့ အရပ်သားတစ်ယောက်၊ မြောင်းမြခရိုင်မှာလည်း သူနဲ့ ရာဇ၀တ်ဝန်(ရဲအရာရှိ) ၂ယောက်ဘဲ အင်္ဂလိပ်ရှိတယ်..။
အရာရှိတွေကို လစာငွေနဲ့ နေအိမ်အဆောင်အယောင် ကောင်းကောင်းပေးထားပြီး သူတို့ကလည်း ICS များအဖြစ် အစိုးရတာဝန်ကို အကောင်းဆုံးထမ်းဆောင်ကြပါတယ်..။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ မရှိသလောက်နည်းပါတယ်..။ အောက်ခြေတိုင်းရင်းသားဝန်ထမ်းများကတော့ လစာနည်းတဲ့အတွက် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေ ရှိပါတယ်..။ သူတို့လူမျိုးတွေကို အကျင့်မပျက်အောင် လုပ်ထားတာပါ..။
စစ်အသုံးစရိတ်အနေနဲု့လည်း မြန်မာပြည်သိမ်းစစ်ပွဲနဲ့ တိုင်းရင်းသားပုန်ကန်မှုတွေကို နှိမ်နင်းပြီးတာနဲ့ စစ်တပ်ကို ချက်ချင်းရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် စစ်တပ်ကုန်ကျစရိတ်မရှိတော့လို့ မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးဘက်မှာ လိုအပ်သလိုသုံးနိုင်ပါတယ်..။
သူတို့အနေနဲ့ မြန်မာပြည်ကို ငြိမ်ဝပ်ပိပြားအောင်၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာအောင်၊ အခွန်များများရအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ အစိုးရအဖွဲ့ကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ စွမ်းဆောင်ရေကောင်းကောင်း လုပ်ခဲ့ကြလို့ပါ..။
ဒီနေ့ခေတ် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်နဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေကို လိုသလောက်ဘဲ အတော်ဆုံး လူနည်းနည်းနဲ့၊ လစာကောင်းကောင်း၊ Facility ကောင်းကောင်းပေးပြီး ဖွဲ့စည်းနိုင်ရင် ၀န်ထမ်းတွေအတွက်ကော၊ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ေ၇ာ ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်..။
မှန်ပါတယ်အဘရေ…မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ အစိုးရဋ္ဌာနများမှာ ၀န်ထမ်းအင်အားဖေါင်းပွနေတာအမှန်ပါ..
ဒါကြောင့်လဲခေတအဆက်ဆက်အစိုးရ အရှုံးပေါ်ခဲ့တာပေါ့..Lean manufacturing မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ..
အဘပြောတဲ့အကြံအတိုင်းဋ္ဌာနတိုင်းကို Lean ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ရင် ၀န်ထမ်းတွေလဲ လစာလောက်လောက်ငငနဲ့ အစိုးရလဲ ကြွေးမြီနဲနဲနဲ့ ကျိုးစားလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်..
ကျုပ်တို့ရဲ့ တိုးတက်မှု့ရပ်တန့်နေတဲ့ နိုင်ငံတော်ကြီးဟာ……လျှင်မြန်စွာတိုးတက်လာမည်ဟု
ခုတစ်လော အင်တာနက်မသုံးဖြစ်လို့ ဘယ်စာမှမဖတ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ သုံးတော့လည်း ကွန်နက်ရှင်က အလွန်တရာ နှေးကွေးလေးလံနေသဖြင့် အဆင်မပြေဖြစ်နေတော့ စဉ်းစားချင်တာတွေတောင် မစဉ်းစားရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ ခုတောင် အဘစာတွေကူးသွားတယ် အဘရေ နောက်မှ ကော့မန့်ပေးတော့မယ်။
ဟုတ်ပါ အဘရယ် ပြောမှ ပဲ ကိုယ်လစာတိုးတောင်ချင်ရင် သူများ စီးပွားရေးထိခိုက်တော့မယ်နော်… အဟင့် တိုးမတောင်းလို.လဲမရဘူးလေ… လောက်မှမလောက်တာ..
ကျွန်တော်တို.တော့ ကံကောင်းလို.အလုပ်ရတယ်.. ကံဆိုးချင်တော့ FEC နဲ.ရတယ်.. Exchange Rate နဲ.ရေတိမ်နစ်နေတယ်..ဟိဟိ
( Bravo uncle F R )
In these days, I saw on TV ( Discovery Channel )-HISTORY,
” Post war condition of England “.
They ( British ) reduced their usage of materials and foods, they worked hard as double and exported more and more to solve the problem of debt by WW 2.
They got success by following the discipline. It was admirable.
So… There isawill, there isaway.
အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေများအောင် အကြံပေးထားလို့ အဘ အဆိုကို ကန့်ကွက်ပါတယ် …
တကယ်တော့ လက်ရှိအလုပ်တွေမှာ ၀န်ထမ်းတွေ မပိုနေပါဘူး … လိုတောင်လိုနေပါသေးတယ် … အခုအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ ၀န်ထမ်းများများခန့်ပေးဖို့ ခွင့်ပြုထားတယ် … ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပပျောက်ရေး အစီအစဉ်ထဲက တစ်ခုပေါ့ …
ွှရီစရာတော့ကောင်းတယ် … ကျွန်မရေးလိုက်တာက ၀န်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပွဲတုန်းက ၀န်ကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားကို ဒီအတိုင်းပြန်ရေးလိုက်တာ …
ကြည့်ရတာတော့ လိမ်ပြောသွားတာနဲ့ တူတယ်နော် ….
“…အစိုးရဝန်ထမ်း အနဲဆုံး ၃ ပုံ ၂ ပုံ ကို အလုပ် ဖြုတ်ပြစ်မှ ရမယ် ။
ကျန်ခဲ့တဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်း တွေက အလုပ်ကို လက်ရှိထက် သုံးဆ ပိုလုပ်ပေးရမယ် ။…”
နောက်တခါ ကိုဖေါရင်း မြန်မာပြည်ပြန်လာရင် ဆိုင်ကယ်စီးခမောက်လေးတော့ ဆောင်းထားပါဗျာ
လက်ရှိမြင်နေရတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေက ဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့ အခြေအနေပါနော..
ရှေ့လျှောက် ဒါ့ထက် အများကြီး ဆိုးတော့မှာပါ …
လက်ရှိကြွေး ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံဆိုတာက မြန်မာပြည်ကို တရုတ်ကလွဲရင် ဘယ်သူမှ ငွေမချေး အကြွေးမရောင်းတဲ့အခြေအနေမို့ပါ။
အခု ဆန်ရှင်တွေ လျှော့လိုက်ပြီးရင် သူ့ထက်ငါ ၀ိုင်းချေးပေးကြတော့မှာပါ။
၁၁ ဘီလျံဆိုတာ သာမန်အားဖြင့် ဘာမှ သိပ်မများပါဘူး။ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုက အလွန့်အလွန်အားနည်းနေလို့ ကိုယ့်အတွက်တော့ တော်တော်များနေတာပါ။
လက်ရှိ အစိုးရဘတ်ဂျက်လိုငွေ ဆိုတာကလဲ ကနဦးလျာထားချက်ပါ။ ပြီးတော့ အဲဒီထဲမှာ တဒေါ်လာကို နှုံးဟောင်းနဲ့တွက်ထားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေပါနေပါတယ်။
တကယ်စင်စစ်မှာ ဒါ့ထက်နှစ်ဆတော့ အသာလေးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဆိုတော့ ဘယ့်နှယ်လုပ်ကြမလဲ ???
ကိုဖေါရင်းရဲ့ အထင်မြင်ချက်လေးတွေလဲ ဖတ်ချင်ပါသးတယ်…။
ကိုကြီးဖေါရေ၊ တစ်ချို့ကလည်း သည်လိုဖြစ်ရတာတွေသည်၊ တုင်းပြည်ဝင်ငွေအပေါ် ကိုယ်ကျိုးရှာခဲ့ကြသောလူတစ်စု၏၊ကိုယ့်အကျိုးစီးပွါးရေးဇောင်းပေးဆောင်ရွက်သည့်၊လွဲမှားသောဘတ် ဂျက်အသုံးတွေကြောင့်လို့ ပြောကြပါ သည်။
အစိုးရမှ အရှုံးခံလုပ်ပေးရတယ်ဆိုတာ ဟိုး ဦးနေ၀င်းလက်ထက်မှာ၊လောင်စာဆီ၊ဆန် စသဖြင့် ရှိခဲ့ပါတယ်
ဒါလည်း ပြည်သူအများပိုင် ဘတ်ဂျက်မှ ပြည်သူအတွက် အခြေခံ ကုန်တွေသုံးနိုင်ဘို့ လုပ်ပေးရတာ အစိုးရ
ထိုက်တန်သောလစာ၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကို ဖန်တီးပေးရမှာ အစိုးရတာဝန်ပါ။
ဒါတွေဖန်တီးနိုင်သောနိုင်ငံရေးအခြေအနေကို တိုင်းပြည်တစ်ကယ်ချစ်ရင် ချက်ချင်း အမှန်အကန်ပြောင်း
ငွေကလေးရလာလိုက် ၊ ၀ိုင်းသုံးလိုက်ကြ ဆို လန်ကွတ်တီတောင်ကျန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ယခုလွှတ်တော်မှာ၊ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေမှု ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့၊ နည်းကတော့ဟုတ်နေပါတယ်၊
လောလောဆယ်၊ ယခင်လို ၀န်ကြီးအသစ်တစ်ယောက်တက်လာ၊ဘတ်ဂျက်တစ်ခုပြ၊ဖြုန်းလိုက်ကြ ယူလိုက်ကြ၊ နောက်တစ်ယောက်တက်လာ၊ အဲသည်လုပ်ပြီးတာကိုပဲ ပြန်ဖျက်၊ပြန်အသစ်စလုပ်လိုက်ကြ
ဖြုန်းလိုက်ကြ၊ယူလိုက်ကြ၊ ဆိုတာတွေလုံးဝ အဲသည်လူတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်၊ ဘတ်ဂျက်ဖြုန်းသူတွေပါ။
တစ်ခါတည်းအစအဆုံစဉ်းစားပြီး သေချာမှလုပ်တာမဟုတ်ပဲ၊ နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက် ဒို့ဘတ်ဂျက်ဖြစ်နေ တာတွေ၊ ကို အရေးယူလျှင်၊မှန်ကန်သောအသုံးဖြစ်မှာပါ။
ယခင်ဝန်ထမ်းဟောင်တွေက စက်ရုံဟောင်းမှာအလုပ်ကမရှိ၊ပြုတ်မှာလား၊ အစားသွင်မှာလား၊စိတ်သောက
လောလောဆယ်၊ကျော်စွာအမိုးနီးယားစက်ရုံ ဟာ ဥပမာတစ်ခုပါ၊ အဲသည်အစားထိုးစက်ရုံသစ်တွေကို
ပုသိမ်၊ မှော်ဘီမြောင်းတစ်ကာတွေမှာတည်ပြီး၊၀န်ထမ်းသစ်တွေခန့်၊ ကျော်စွာမှ ၀န်ထမ်းဟောင်းတွေ
အဲတော့ လုပ်ငန်းတွေအားလုံးနီးပါးပုဂ္ဂလိကကိုအပ်၊ ၀န်ထမ်းတွေစိတ်ကျိုက်ရွေးပြန်ခန့်၊ တစ်ချို့ပင်စင်၊
လျှော်ကြေးပေး၊ နောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းအလုပ်တွေရရှိနိုင်အောင်လုပ်ပေး၊ အိုဗျာရှုပ်တယ်၊အစိုးရအဖွဲ့ကိုပါ ပုဂ္ဂလိကပေးလိုက်ပါတော့ဗျား၊ လွှတ်တော်မှာသာ ပြည်သူရွေး တဲ့သူတွေ ထား။ ကဲမှတ်ကရော။ကျုပ်လွန်ရင်ခွင့်လွှတ်ဗျာ၊ တစ်ကယ်မွန်းကြပ်လာတယ်ဗျာ။
ပထမဦးဆုံး အငယ် အသစ်တွေကို အနားပေးမယ် ။
လုပ်သက် ( ၁၀ ) နှစ်အောက်ဆိုရင် ပင်စင် မပေးရဘူး ။ Graduty ပဲပေးရတယ် ။
နိုင်ငံတော်လည်း ပင်စင် စရိတ် နှင့် Burden မဖြစ်တော့ဘူး ။
လူငယ်တွေ ဆိုတော့လည်း နောက်အလုပ် ရှာရလွယ်တယ်လေ ။
” ဒီအကြွေးဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိလဲလို့တော့မမေးချင်တော့ပါဘူး ”
အော် Thel Nu Aye ရယ်
အဖေက အကြွေးယူထားမိရင် ၊ သားသမီးက ဆပ်ရမှာပေါ့ ။
ဆိုးမွေ ဆိုတာ အဲဒါကိုခေါ်တာ ။
ဒါပေါ့လေ။ အဘရယ်။ ခံရတော့မှာပေါ့။ မိဘမကောင်းသားသမီးခေါင်းဆိုတာဒါမျိုးပြောတာဖြစ်မယ်။ ထားဝယ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ ခံ ခံ ခံ ပေါ့။ ( ခံ = ဟုတ်တယ် )
တစ်ယောက် အကြွေး (၁၈) သိန်း မရှိ လောက်ပါဘူး၊ အရံငွေ တွေ ရှိပါသေးတယ်၊ နိုင်ငံ တစ်ခုအန နဲ့
ဒီလောက်က မများသေးဘူးထင်ပါတယ်၊ ဝန်ထမ်းက ပိုတဲ့နေရာ ပိုပါတယ်။(တစ်ကယ် အလုပ်မလုပ် ပဲ
လစာ ယူနေတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ၊ ဖွဲ့စည်းပုံက တော့ ဘယ်ဌာန မှ မပြည့် သေးဘူးထင်ပါတယ်) အဓိက က
ဝန်ကြီးဌာန ဖောင်းပွ နေတာပါ။ မန်နေ့ဂ်ျမန့် ကောင်းရင် အကုန် ပြေလည် သွားနိုင်ပါတယ်၊ လစာကတော့ တိုးပေးသင့်ပါပြီ၊ စာပို့ခတောင် နိုင်ငံတကာ နဲ့ ယှဉ်တောင်းပြီး လစာကျတော့ မယှဉ်လို့ သင့်တော် ပါ့မလား၊
သမ္မတ ကြီး စဉ်းစားမိသ လား မသိ ကြောင်းပါ။( ဟေ.. လစာ က အဲ လောက်ပဲ ရတာလား။ ငါက တိုးပြီးပြီ
ထင်နေတာ) ဆိုရင်တော့ တေပြီဆရာပဲ ဗျို့
အလုပ်အကိုင်ရှားပါးနေတာမို့ .သူသူကိုယ်ကိုယ် မလုပ်ချင်လဲ ရရာအလုပ် လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် အဘားရေ
အဘားက သများတို့ လို အလုပ်သမားမဟုတ်၊
အဘားက ကပ္ပတိန်၊ဘောဇိမိုလို့အလုပ်ခေတ္တမရှိတာ ပြဿနာမရှိပေမဲ့
သများတို့ အလုပ်ပြုတ်လို့ .အလုပ်မသစ်ခင် ကြားကာလမှာ ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါးပြတ် ဘီယာငတ် ဘီအီးအကြွေးတက်
မိန်းမနဲ့ ကွိုင်တတ်..သားသမီးအကြည်ငြိုပျက်..အိုး..များကြီးမိုလို့ ..
ပိုကောင်းမဲ့အကြံအဥာဏ်လေး ထပ်စဉ်းစားစေချင်ပါတယ် အဘားရေ့
သများက သဂျီးတူမိုလို့ 
အလုပ်မရှိလဲ သဂျီးတူမက ကျွေးထားနိုင်သော်ငြား
၀န်ထမ်းဘ၀နဲ့တစ်ကယ့်အဆင်မပြေတဲ့လူတွေရှိတဲ့အတွက် ၀န်ထမ်းလျှော့ချရေး လုပ်ဖြစ်လျင်တောင်
မသဒါရေစာတွေစားပြီး ဗိုက်ဖေါင်း၊အူစို၊ တိုက်ကြီးကြီးမှာ ဇိမ်နဲ့အကန်တော့ခံပစ္စည်းတွေယူနေတဲ့လူတွေကိုသာ
something wrong….(လက်ရှိ အကြွေး ဒေါ်လာ သန်း ၁၁၀၀၀
နိုင်ငံခြားကို ပြန်ဆပ်ရမယ့် အကြွေး ( ကျပ် ၁၈ သိန်း ) ခန့် )
may be 180000kyats…(if 1$=800kyats)
11billians = 11000000000
am i wrong!!!!?
Sorry ပါဗျာ ။
ဟုတ်ပါတယ် လူတစ်ဦးကို အကြွေး တစ်သိန်း ရှစ်သောင်း စီပဲ ရှိပါတယ် ။
ယူအက်စ်ကတော့… အခုရွေးကောက်ပွဲကာလ..Big Government ဆိုတာ တော်တော်အပြောများနေတယ်..။
၀န်ထမ်းများပြီး.. အစိုးရက.. အကြီးကြီးပေါ့..။
မြန်မာပြည်မှာ ၀န်ထမ်းက.. များလွန်းတယ်လို့တော့.. သိပ်မထင်ပါဘူး..။
အဓိက….ပြဿနာက..အလုပ်လုပ်ရမဲ့သူတွေက.. အလုပ်မလုပ်ပဲ.. တိုင်းပြည်အရင်းအမြစ်တွေ.. ထိုင်သုံးဖြုန်းစားသောက်နေသူတွေများနေတာလို့ ထင်ပါတယ်..။
သားသုံးသားတဲ့..။ စစ်သား၊ ဘုရားသား၊ ကျောင်းသား..
တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ.. ကျောင်းသားလည်း..ကုန်ထုတ်လုပ်မှုရှိတယ်..။ အလုပ်လုပ်ကြရတယ်..။
သုံးဖြုန်းစားသောက်ယုံတင်မပြီး.. မှားယွင်းတဲ့အယူဆွေး..အယူဟောင်းတွေကိုပါ..လူထုထဲ.. တည်တံ့ ပြန့်ပွားအောင်…သား၂မျိုးက..(၀မ်းတူးရိုက်ပြီး) ဖိရိုက်သွင်းပေးနေတော့ကာ…
… ဘေးကပ်ရက်..အိမ်နီးချင်းတွေမှီဖို့.. ၁၀ဆယ်ချောင်းထောင်ပြရုံတင်မက…
စောင့်လိုက်ဦးဟေ့.. အနှစ်၂၀.. အနှစ်၂၀..
၂) ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ..အစွန်းရောက်နေတာတွေ.. .အရင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ရမယ်..။
၃) သာသနာရေး၊ စစ်ရေးအရိပ်မှီပြီး.. ဥပဒေအပေါ်ရောက်နေသူတွေ/ရောက်နေတာတွေကို.. အရင်စိစစ်ပြုပြင်ရမယ်..
တိုင်းပြည်တပြည်… ဆိုး-ကောင်းရဲ့.. အဓိက.. သော့ချက်ပဲ…။ ဒါက.. ဟိုးအနှစ်၂၀၀၀ကျော်ကတည်းက အခုထိ. ကမ္ဘာသမိုင်းကြည့်ရင်လည်း… တသမတ်ထဲပဲ… . မပြောင်းလည်းသေးဘူး..။
ဒီခေတ်.. ဒီအချိန်.. အမေရိကားကို ဘယ်လိုမောင်းနှင်နေသလည်း…ဘယ်လိုတွေးပြသလည်း.. တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်…
By David Nakamura and Michelle Boorstein, Thursday, February 2, 5:53 PM
President Obama, speaking at the National Prayer Breakfast, said his policy arguments stem from his interpretation of his Christian faith.
အိုက်လိုပြောဂျေးဆို ကြောင်ကြီးလည်း ဝင်နှောက်အုံးမယ်။
ဒေါ်လာသန်း၁၁၀၀၀ အကြွေးရှိတယ်။ နှစ်စဉ်အတိုးက ဘယ်လောက်ရှိမလဲ ၃ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်လေးထား။ ဒါဆိုဆို တနှစ်ကို အတိုး ဒေါ်လာသန်း ၃၆၀၊ တလကို ဒေါ်လာသန်း ၃၀၊ နေ့စဉ် အတိုး တနေ့ဒေါ်လာ၁သန်း ပေးနေရတယ်။ မြန်မာငွေနဲ့ဆို ကျပ်ငွေသန်း၈၀၀ကျော် မစားရမသောက်ရ ပေးနေရတာ။ အခုဟာက ဝါဇီပုံနှိပ်စက်ကနေ ထုတ်လို့ရတဲ့ကျပ်ငွေမဟုတ်ဘူးနော်၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ အစစ်ပေးရတာ။ ချေးငွေဆိုတာ တိုးရင်းပေါင်းသွားတယ်။ မဆပ်လေ အရင်းတက်လေ အတိုးပိုများသွားလေပဲ။ ဒီကြားတယ် တိုင်းပြည်လုပ်ငန်းတေါက အရှုံးပြနေတယ်ဆိုတော့ အရင်းမပြောနဲ့ အတိုးတောင် မဆပ်နိုင်ဘူး။ ဘာလုပ်ကြမလဲ…လွယ်ပါတယ်။။။ မရှိရင် ခိုးစား၊ မရင် လုစားပေါ့..ဒါပဲရှိတယ်။ ညူကလီးယားဗုံး တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးပျံရအောင်ထွင်၊ ပြီးတော့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေကို ပစ်မယ်ဖောက်မယ် တကဲကဲလုပ်၊ တရုတ်ကြီးပါမချန်နဲ့။ သူတို့အနာမခံနိုင်ရင် ဆက်ကြေးပေးဖို့ လာညှိလိမ့်မယ်။
တခုလောက်ဝင်ပြောကြည့်မယ်နော်။ အဲသလိုလစာတွေတိုးပေး၇င်တော့ စင်ကာပူတို့ ဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့တော့မပြောပါဘူး။မလေးရှားတို့ထိုင်းတို့မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေတော့ အများကြီးပြည်တော်ပြန်လာနိုင်တယ်။ အခုလိုငွေဈေးကကျနေပုံနဲ့ ပြည်တွင်းမှာလစာတွေကတိုးမှာဆို၇င်တော့၊ ပြည်တွင်းမှာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းနေလို့ကတော့ဇယားရှုပ်ကြဦးမယ်။
အခွန်ဦးစီးဌာနမှာ ရလာတဲ့ဘတ်ဂျက်ကို အပီဝါးတာက ဦးစီးမှူး
အသုံးစရိတ်လျှော့တယ်ဆိုပြီး ဂိတ်ပေါက်စောင့်တဲ့ကောင်ကို အလုပ်ဖြုတ်မယ်ဆိုတော့
သြော်အစိုးရ၀န်ထမ်းဖြစ်ရတဲ့ ဘ၀ကလဲဆိုးလိုက်တာနော် ကိုယ်တွေမှာတော့ ဘွဲ့ရပြီးတာတောင် အောက် ခြေ၀န်ထမ်းဖြစ်တော့ ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ မလောက်လို့ ညပိုင်းဆေးရုံမှာ အချိန်ပိုင်း အလုပ်ဆင်းရသေးတယ်
သေစမ်း….။ ကျုပ်တို့ရွှေနိုင်ငံရွှေပြည်ကြီးရဲ့ပေးဆပ်ရန် တင်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံခြားကြွေးမြီပမာဏက နည်းနည်းလွန်းလွန်းမှ မဟုတ်ပါလားဗျို့ …။ ၈၈ ခုနှစ် မတိုင်မီ တစ်ပါတီ ဗိုလ်နေ၀င်းလက်ထက်မှာ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၈၄၀၀ ကျော်၊ ဗိုလ်သန်းရွှေ စစ်အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၂၈၀၀ ကျော်၊ စုစုပေါင်း ကြွေးမြီ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၁၂၀၀၀ နီးပါးတဲ့ဗျာ…။ ကျုပ်တို့ ပြည်တွေဘ၀… ဆင်းရဲစုတ်ပြတ် မွဲတေပြာကျ၊ ဘာခံစားမှု ဘာအခွင့်အရေးမှ မရ၊ လူပီပီသသ လူလိုသူလို နေထိုင်ရှင်သန်သေဆုံးနိုင်ခွင့် မရှိရတဲ့ ကြားထဲ နေရင်းထိုင်ရင်း တစ်ယောက်ကို ဒေါ်လာ (၂၀၀) စီ အကြွေးတင်နေပြီဗျို့ ။ ကြွေးတင် ရှင်ဘုရင်ဆပ် ဘဲ ကြားဖူးပါတယ်၊ ခုတော့ဗျာ.. “တောက်” ။ ငါတကောကော လုပ်ချင်ရာလုပ်သွားတဲ့ အာဏာရှင် သေချင်းဆိုးတွေရဲ့ကြွေးတွေကို ရွေးကောက်ခံပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက ကျုပ်တို့ ကို ဆပ်ခိုင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပြီပေါ့။ မီးဖွားခန်းတွေထဲက ပြွတ်ခနဲ ထွက်လာတဲ့ “အူဝဲ” အော်သံနဲ့ပိစိကွေးလေးတွေခမျာလည်း လောကကြီး ဘာမှန်းမသိခင်ကတည်းက ဒေါ်လာ (၂၀၀) ကြွေးပူမိနေတဲ့ ကလေးတွေပါလား။
ပြောတာလဲပြောကြပေါ့ နော့။ သုညတွေများပိုနေသလားလို့။
ပုံဏ္ဏာဆင်စမ်း တဲ့ အဆင်ကြီးဖြစ်နေပြီထင်လို့။
ကိုရဲရင့်ငယ် http://www.yeyintnge.com/2012/01/blog-post_5828.html က ပါ။
ကိုရဲရင့်ငယ် နဲ့ ကိုအောင်မျိုးထွန်းရေ ဖော်ပြခွင့်ပေးပါ၊ကျေးဇူးပါလို့။
(သူ့စာရင်းအရ တော့ တဒေါ်လာ ၉၀၀ ဆိုရင်တောင် ကျပ် တသိန်းရှစ်သောင်းပေါ့၊ ၈၀၀ ဆိုပိုနဲသေး)
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေက အပေါ်ယံသဘောပါ။ အယ်ဒီစီနိုင်ငံတနိုင်ရဲ့ ကြွေးမြီသက်သာခွင့်၊အတိုးသက်သာ
ခွင့်၊ အကြွေးလျှော်မှုဆိုတာတွေ ရှိပါသေးတယ်။
ပြောခဲ့ပါတယ်နော်။ လယ်ဂျစ်တစ်မေစီ ရလာရင် ညှိလို့ရပါတယ်။
ဘယ်သူမှလဲ လည်ပင်းညှစ်ပြီးလာမတောင်းသေးဘဲနဲ့ ဘာလို့ များ အော်နေကြပါလိမ့်။
အမှန်တော့ ဒီ Post က ကျွန်တော် လေးလေးနက်နက် မဟုတ်ပဲ ။
ခပ်ပျော်ပျော် နှင့် ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးပဲ တွေးကြည့်တာပါ ။
အခုလို တရက် မပြည့်ခင်မှာ Comments ၃၀ လောက်တက်လာတော့မှ လန့်သွားတယ် ။
တကယ့်တကယ်ကတော့ အစိုးရဝန်ထမ်း ၃ ပုံ ၂ ပုံ ကို အလုပ် ဖြုတ်ပြစ်ဖို့က
မဖြစ်နိုင် ပါဘူး ။ ဖြစ်လဲ မဖြစ်သင့် ပါဘူး ။
Politically & Socially justify မဖြစ်ပါဘူး ။
နောက်ပြီးတော့ အကြွေး တစ်ခုထဲ တွက်ချက်လိုလဲ့ မရပါဘူး ။
နိုင်ငံရဲ့ Foreign Reserve, Natural Resources & Human Resources,
Recent Assets & potential တွေလည်း ထည့်စဉ်းစားရမှာပါ ။
ကျွန်တော်က ရွာသူားတွေကို Brain Storming လုပ်စေချင်လို့ အစ ဆွဲထုတ်မိတာပါ ။
ရွာသူားတွေ ကျွန်တော့်ကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါဗျာ ။
Comments တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
မိဘရဲ့ အကြွေးကို သားသမီးက ပေးဆပ်ရမယ်ဆိုတာမှန်သလို
မိဘဆီက အမွေအနှစ်ကိုလည်း ဆက်ခံခွင့်ရှိတာမို့…
(……) တွေများ အမွေဆက်ခံရမယ်ဆိုရင်…..
ကိုယ်တစ်ယောက်စာ ၁၈သိန်း ပျော်ပျော်ကြီး ပေးဆပ်လိုက်ချင်ပါရဲ့။
မ ဆောရီး ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ အိုကေပါတယ်။ဒီမှာက တော်ပါသေးတယ်။
ဒီမှာထက်ပို ဆိုးနေတာက ဂဏန်းတွက်မှားပြီး ဟိုဘက်ပို့စ်မှာ
“သိန်း ၂၀၀” တောင် ဖြစ်နေလို့လန့်ဖြတ်ပြီး ရေးလိုက်မိတာပါ။
အစိုးရ မကောင်းလို့ပူရ၊ ဒီမိုကရေစီ အသံလေး သဲ့သဲ့ကြားရတုန်းရှိသေး အကြွေးဆိုတော့
လူတွေလဲ သနားပါတယ်ဗျာ။ တကယ်ပါ။
ကောလာဟလ ဆို ဘုရားဟောလို ယုံတတ်လို့ လဲ စိုးရိမ်သွားမိတယ်။
အဲဒါဆိုရင်တော့ဗျာ.။ ပိုပြီးစိတ် အေးရအောင်ပြောပေးလိုက်ပါအုန်းမယ်နော့။
ကျနော်တို့ထက် အကျူထွေး အကြွေးထူသူများကတော့ သူတို့ပါတဲ့။
ကန်ဘာ့ နံပါတ် ၁၀ (တော့ပ်တဲန်း) အကြွေးထူနိုင်ငံများဆိုဘဲခင်ဗျ။
တိုင်းပြည်တပြည်မှာအကြွေးက အရေးပါသလား မပါသလား စာရင်းလေးကိုကြည့်ပြီး
စိတ်အားငယ်မှာ စိုးလို့ (အားငယ်စရာတွေများနေတဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ ကို နားလည်မိလို့ပါ)
တော့ပ် ၁၀ နိုင်ငံအနက် လူကြီး(၉) နိုင်ငံ ရဲ့ အနေအထားလေးပါ။
ကိုဖော ပြောသလို ဘရိမ်းစထရောင်းမင်း လုပ်ကြည့်ကြပါနော့။
1.United States of America – $13,399,859,000,000
(((((တယောက်စီ အကြွေးဆပ်ရန်ပမာဏ $43,000 ))))
2.United Kingdom – $9,191,104,000,000
(((တယောက်စီ အကြွေးဆပ်ရန်ပမာဏ $150,000 ))))
3.Germany – $5,208,000,000,000
4.France – $5,021,000,000,000
5.Spain – $2,478,000,000,000
6.Luxembourg – $1,994,000,000,000
7.Republic of Ireland – $1,841,000,000,000
8. Japan – $1,492,000,000,000
(((((တယောက်စီ အကြွေးဆပ်ရန်ပမာဏ $11,740 )))……ကဲ ညီလေးဂီ၊ Citizen ခံမလားဝေ့
9.Belgium – $1,313,000,000,000
(Source: World Bank , IMF and International Business Times Magazine)
အားမငယ်ဘဲနဲ့ တော့လဲမနေနဲ့အုန်းနော်၊ ကြိုးစားတာတော့ ကြိုးစား၊လုပ်တာတော့လုပ်ရအုန်းမှာဟဲ့။
အမယ် ရသေးတယ်ဟဲ့တော့ လုပ်နဲ့နော်။ ဟိုက ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်းက သဌေးလိုမျိုး။
မြန်မာပြည်က ခုမှ ဈေးရောင်းမယ်ကြံကာရှိသေးတာလဲ မမေ့နဲ့ပေါ့။
အဓိက အကျဆုံးက အကြွေး ပမာဏ မဟုတ်ပဲ
အကြွေး နှင့် GDP အချိုးပါ ( Debt-to-GDP ratio )
အဲဒီ အကြွေး နှင့် GDP အချိုး အရဆိုရင်တော့
ဂျပန် နိုင်ငံက အထူး အခြေအနေ ဆိုးနေပါတယ် ။
တစ်နှစ်လုံး တစ်နိုင်ငံလုံး ထုတ်လုပ်သမျှ GDP ရဲ့ 220 % အကြွေး ရှိနေပါတယ် ။
အမေရိကန်က 94% ပဲရှိပါတယ် ။
UK က 75% ပါ ။
တရုတ်ကြီး China က 33% ပဲရှိပါတယ် ။
Source = IMF ( http://www.imf.org/external/data.htm )
အဲဒီလို သိပြီ ဆိုရင် ဆက်ပြီးပြောပေးလို့ရပါသေးတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စဉ်းစားစရာအချက်တွေများစွာကျန်ပါတယ်။
အဲဒီအကြွေးတွေ ဟာ “Capital formation” မှာ ဘယ်လောက်သုံးထားသလဲ။ရင်းနှီးထားတယ်ပေါ့နော်။
—(Capital to GDP ratio)ဂျီဒီပီရဲ့အချိုးဘယ်လောက်ရှိလဲ ဆက်ရှာရပါတယ်။
–နောက်ပြီးတော့ ကန်ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ စပယ်ရှယ်ဒရော်ရင်းရိုက် ( SDRs )။
—ဖောရိမ်းရီဆာ့ဗ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ ဆိုတာအထိ လိုက်ကြည့်ရပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ” capital formation” ကအရေးကြီးလဲဆိုတာသိသာပါတယ်။
ဆိုလိုတာက “ရင်းနှီးမြုပ်နံမှု” ကြောင့်
ဂျီဒီပီဆိုတာ အနိမ့်အမြင့်ရှိတတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ ၂ နှစ် ၃နှစ်အတွင်း ပြင်းထန်စွာဖြစ်
မြန်မာထက် အကြွေးများပြီး မြန်မာထက်ချမ်းသာနေတာ ” Capital Formation”ကြီးတာ ကြောင့်ပါဘဲလို့
နောက်ထပ် အချက်တွေလဲ ရှိပါသေးတယ်။ မြင်သာတဲ့ လူတိုင်းနားလည်တဲ့အချက်လောက်ပြော
Special Drawing Right ( SDR ) ကိုနည်းနည်း ရှင်းပြပါအုန်း ။
ဟိုးအရင်က သင်္ဘောတွေရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးအခ Telecom Charges တွေကို
Gold France နှင့် ပေးရသဗျ ။ နောက်ပိုင်း SDR နှင့်ချေရသဗျ ။
နိုင်ငံတကာ Standardized လုပ်ထားတဲ့
ငွေကြေး ပုံစံ တစ်မျိုးမှန်းတော့ သိတယ်ဗျ ။
သမိုင်းကြောင်းလေး ရှင်းပြပါလား ။
၁။အလွယ်ပြောရရင်တော့ ဟိုး ရွှေစံချိန်စနစ် ပျက်သွားပြီးနောက်ပေါ်လာတဲ့ အာမခံစနစ်ပါဘဲ။
portfolio ဆိုတဲ့ စကားလေးများကြားဘူးပါသလားဗျာ။အာမခံစတော့ရှယ်ရာလက်မှက်တမျိုးပါ။
ＳＤＲｓဆိုတာလဲ portfolio ပါဘဲ။ အိုင်အမ်အက်(ဖ) မှာဝင်ထားတာပေါ့နော်။
ဆက်ပြောရရင် ပြည်ပငွေပေးငွေယူရှင်းတမ်းမှာ သူနဲ့ ရှင်းလို့ရပါတယ်။
၂။ အသွင်အပြင်အားဖြင့်တော့ ＳＤＲｓဆိုတာ
Hedge fund ဆိုတဲ့ အရင်းနှီး-စည်းရိုးရံပုံငွေ(အာမခံငွေ) ကို အိုင်အမ်အက်ဖ်မှာ
အချုပ်ကတော့ currency basket လို့ခေါ်တဲ့ ငွေကြေးလေးမျိုး (ဘရစ်တစ်ရ်ှပေါင်စတာလင်၊ ယူအက်စ်ဒေါ်လာ၊
ဂျပန်ယန်း၊ယူရို )နဲ့ အာမခံထားတဲ့ ပမာဏပါ။
တလုံးထဲပြောရရင် ပြည်ပငွေပေးငွေယူရှင်းတမ်းအတွက် အာမခံထားငွေပါဘဲ။
(ဟိုးရင် ၁၉၆၉အထိက ရွှေတွေနဲ့ ယူအက်စ်ဒေါ်လာကိုရောထားခဲ့ကြတာပါ။)
အဲဒီ နမူနာကို ယူပြီး ဂျိန့်ရဲန်ကန်ပနီကြီးတွေ (ဥပမာ တိုယိုတာဆိုပါတော့)Hedge fund ထားပြီး
“ကာ”ထားကြလို့ ခုလိုခံနိုင်ကြတယ်လို့ ဆိုတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ လူသိမခံကြဘူးပေါ့ဗျာ။
အမှန်တော့လဲ အမေရိကန်တို့ ဂျပန်တို့ ပြာနေတာကြာပါပြီ၊ အဲဒီ ရီဆာ့ဗ်တွေ အများကြီးရှိနေလို့
အခုသမ္မတအိုဘားမားကို.. ဆွဲချနေတာ.. အဲဒီအကြွေးပြသနာပါပဲ…။
အဲဒါအကြောင်း…အချိန်ရရင်… သေချာရှင်းပြပါလားကိုသစ်မင်းခင်ဗျာ.. မြန်မာလူထုအတွက် အကျိုးများမယ်ထင်မိပါတယ်..။
(ကျုပ်မလည်း.. ဝေါစထရိကလူတွေသွားမေးမိတော့ကာ.. “အလုံး”တွေနဲ့ ခဏခဏ”ထု”ခံရလို့..ကြိုကန်ထားတာ…)
ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲ ပေါ်ရာ ကို ရေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မ အတွေး မှားပါနိုင်ပါကြောင်း၊ လူပြိန်းတွေး တွေး ပြီး ရေးတာ ဖြစ်ပါကြောင်း အရင်ပြောလိုပါတယ်။
နိုင်ငံတိုင်း (တရုတ်မှလွဲ၍) ကြွေးမကင်းဟု နားလည်ခဲ့ဘူး ပါသည်။
ကြွေးဆိုတာ တကယ်တော့ ကြောက်စရာ မဟုတ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကြွေး ကို ဆပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ဖို့သာလိုပါတယ်။
ကိုယ့် မှာ ကြွေးများ လွန်း နေပြီ ဟု သိပါက မလိုသော (ကျွန်မ ထပ်ပြောပါသည် – မလိုသော) အသုံးစရိတ် များကို လျှော့ ရပါမည်။
ထို အသုံးစရိတ် များကို ကန့်သတ်ရန် မည်သည့် နေရာမှာ မလို ဘဲ ဘတ်ဂျက် တွေ ထဲ့ ထားတယ် ဆိုတာ က ကြွေးများသည် ဟု ပြောသည့် သူများ သိကို သိရပါမည်။
ကြွေးများသည် ဟု ကြေငြာ ပြီး ပါက အသုံးစရိတ် ကို လဲ လျှော့ ၊ တိုင်းပြည် ဝင်ငွေ ကို လဲ ပိုများအောင် လုပ်ရပါမည်။
တိုင်းပြည် ဝင်ငွေ များ တိုင်းပြည် ရဲ့ အသုံးစရိတ် မဝင် ဘဲ ကိုယ်ကျိုးရှာသမား များ၏ အိတ်ထဲ ဝင် နေ သည် ကို လဲ ငြင်း၍ မရ ကြောင်း သိရပါမည်။
အဘကိုဖော ပြော သလို အကြွေး ထူ တာ နဲ့ လူတွေကို အလုပ်ဖြုတ် ရမှာ ကတော့ အခုချိန်မှာ နဲနဲ လေးမှ မဆိုင်သေးပါ။
ထို့ကြောင့် တိုင်းပြည် ဝင်ငွေ တွေ ကို တိုင်းပြည် က ပြည် သူတွေ တကယ် သုံး နိုင်အောင် အရင် လုပ်ပေးဖို့ သက်ဆိုင်ရာ မှ စိတ်ထားမွန်မြတ် သူ များ ကို ဦးစွာ ပန်ကြား လိုပါတယ်။
အဲဒီ လို ဖြစ်လာ ရင် ကျွန်မတို့ ပြည်သူ တွေ ဟာလဲ အလုပ်ကို ပိုကြိုးစားခွင့်ရမယ်။ အဲဒီ အကြွေး ဆိုတာ တွေဟာ နိုင်ငံ ရဲ့ ဝင်ငွေ နဲ့ စာရင် မပြောပလောက် အောင် ဖြစ်လာမယ်။
အခု တော့ တကယ် အလုပ်လုပ် ချင် တဲ့ အရည်အချင်း ရှိသူတွေ အတွက် အခွင့် မရ တာပါ။
တကယ်များ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ခွင့် ရလို့ ကတော့ အပြင်က လုပ်သား တွေတောင် ပြန်ပြီးငှား ရမှာတောင် သေချာပေါက်ပါဘဲ။
ကွန်ပျူတာ နက်ဝါ့က် (Network) မှာတော့ အသုံးရှိတယ်။ ပြဿနာ ဖြစ်လာရင် မဆိုင်တာတွေ ကို တစ်ခုချင်း ဖယ်ထုတ် ပြီး တဖြေးဖြေး နဲ့ စုံးမ ကို ရှာရတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်မတို့ ရဲ့ ချစ်သောပြည်မှာလဲ အကြွေးပြဿနာ ဖြေရှင်းဖို့ စုံးမ ရှာနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာတော့ စုံးမ ဆိုတာ အချောင်ခို ပြီး တိုင်းပြည် ပိုက်ဆံ ကိုယ့် ပိုက်ဆံ မှတ်နေသူတွေ လို့သာ ဆင်ခြင်မိ ပါကြောင်း။
အဲဒီ စုံးမ ကို ဘယ်လို ဖယ်ထုတ် ရတယ် ဆိုတာကတော့ ကျွန်မ Networking စာအုပ် မှာ သေချာအောင် ပြန်ဖတ် လိုက်ပါဦးမယ်။ ;-)
” အဘ ကိုဖော ပြော သလို အကြွေး ထူ တာ နဲ့ လူတွေကို
အလုပ်ဖြုတ် ရမှာ ကတော့ အခုချိန်မှာ နဲနဲ လေးမှ မဆိုင်သေးပါ ”
မ Khin Latt ရဲ့
ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာက ဒီလို ကြွေးထူနေတဲ့ အချိန်မှာ
လစာတိုး လိုချင်ရင်တော့ ဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်ဖြုတ် လူလျော့ပြီးမှပဲ
တိုးပေးလို့ ရမယ်လို့ပြောတာပါ ။
အကြွေးထူတာလေး နဲ့ လူတွေကို အလုပ်ဖြုတ် ရမှာလို့ မဆိုလိုပါဘူး ။
လစာတိုး လိုချင်ရင် လို့ပြောတာပါ ။
ကျွန်မ အဓိပ္ပါယ် လွဲကောက် မိတာ စောဒီး ပါရှင့်။ ;-)
တကယ် တော့ လစာ ကို မစဉ်းစား ဘဲ ဥပမာ – လူတစ်ဦး ပျမ်းမျှ ဝင်ငွေ တစ်လ ၁၀၀၀ ကျပ် ဘဲ ရဦး။ ထွက်ငွေ စားရိတ် က ဝင်ငွေ အောက်မှာ ဘဲ ရှိဖို့ လုပ်ပေးရမှာပါ။
ကိန်းဂဏန်း များတိုင်း ကောင်းတာ မဟုတ်ပါ။
အာဖရိက က ဇင်ဘာဘွေ နိုင်ငံ မှာ ငွေကြေး ကို ဘီလျံ နဲ့ တွက်ရပါတယ်။ ပေါင်မုန့်တစ်လုံးကို $Z 10 billion ပါတဲ့။
100 trillion Zimbabwean dollar banknote ကို ကြည့် ကြပါ။
ကျွန်မတော့ ဝင်ငွေတိုးတိုင်း ပြဿနာ ပြေလည်ပြီဟု မထင်ပါကြောင်း။
အရီးချင့် …သများ ရဲ့ အလုပ်တော်တော်များများ …
ပီးတန်ပီး ဂန့်တန်ဂန့်သွားလို့ ..နက်ဖန်ကစလို့ သများ စာပြန်ရေးပါတော့မည်ချင့်…
နတ်ထ်ဝါးကင်း ဟု တွေ့လိုက်ရလို့ မျက်စိများ အရောင်လက်ကာ ချက်ခြင်း ကောက်မန့်လိုက်ရပါတယ်ချင့်..
(နောက်မှ သက်သက် ဆွေးနွေးပါ့မယ် ဘဖော ခင်ဗျား ….သီးခံပေးပါ…)
သများ ကြောက်ရသူကလေးတစ်ယောက် ၇၀-၆၄၀ လကုန် ဖြေမည်ပြောပါသည်ချင့်…
သများလည်း ထိုအပိုင်းတွင် အလွန်ဉာဏ်နည်းသည့်အားလျော်စွာ မကူညီနိုင်ပါချင့်….
ထို့ကြောင့် အနုမြူအပျော့ ၇၀-၆၄၀လေးများ ကောင်းတာလေး ချိရင်ဖြင့် …
ကျေးဇူးပြု၍ …မောင်ဂီ့ကို လက်တို့ပေးပါရန်
လက်ဆယ်ဖြာ ထိပ်မှာမိုးလို့ ..အသနားခံ ပန်ကြားအပ်ပါသည်ချင့် ……။
အဘဖောက အကြွေးကအရေးမကြီးဘူးဆိုပေမယ့် ကိန်းဂဏန်းတွေကကြောက်စရာပါဗျ။
ဟုတ်တယ်… အဘဖောရေ….။ ကျွန်တော့ အမြင်မှာတော့ ဘာအလုပ်မှမယ်မယ်ရရ မရှိပဲ လစာပေးပြီးဖွင့်ထားတဲ့ ရုံးတွေလည်းရှိတယ်ဗျ….။ အဲဒါတွေကို ကျတော့ ဖျက်သိမ်း သင့်တာဗျ….။
နိုင်ငံခြားချေးငွေဆိုတာကဘယ်လို သဘောမျိုးလဲမသိဘူး။ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြန်ဆပ်ရလဲမသိဘူး။
တခြားနိုင်ငံတွေနဲ.. မြန်မာပြည်ကွာခြားချက်ကို ထောက်ပြခဲ့တာ.. မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြတယ်..
ဒါပေမဲ့.. မြန်မာလူမျိုးအလုပ်လုပ်နိုင်သူတွေ..ကိုယ်လက်ပြည့်စုံသန်စွမ်းသူတိုင်းက.. ရာနှုန်းပြည့်အလုပ်မှမလုပ်ကြတာလေ…။ မလုပ်တဲ့အပြင်.. လုပ်နေသူတွေကိုပါ.. မှီခိုစားသောက်နေပါသေးတယ်..။
အကြွေးကို.. သူတို့ကပဲ ဆပ်ရမှာပါ…။
အလုပ်လုပ်နိုင်သူ အနည်းစု.. လွန်ရော.. ၁၀သန်းလောက်က.. ၀န်ပိနေမယ်ထင်မိတယ်..။